မင်းမဲ့စရိုက်ပရိသတ်များ၏သားများသည် Bastard Executioner ကိုနှစ်သက်လိမ့်မည် - တီဗီ
မင်းမဲ့စရိုက်ပရိတ်သတ်၏သားများသည် Kurt Sutter ၏ပြပွဲသစ် The Bastard Executioner ကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်
Sons Anarchy Fans Will Love Kurt Sutter S New Show Bastard Executioner
ခရက်ဒစ် - Bastard Executioner - FX
Star Wars ကတကယ်ပဲ Netflix ကိုလာနေတာလား။ ! နင်ပက်ထရစ်ဟာရစ်နဲ့အတူသင့်ရဲ့မိခင်ပရိတ်သတ်တွေနဲ့ငါဘယ်လိုတွေ့ဆုံခဲ့သလဲ တီဗီ က ပက်ထရစ် Schmidt က လွန်ခဲ့သော5နှစ်က @PatrickASchmidt ကိုလိုက်နာပါ
Sons of Anarchy ကိုဖန်တီးသူ Kurt Sutter မှ FX ဒရာမာ Bastard Executioner တွင်သွေးနှင့်အကြမ်းဖက်မှုများကိုထပ်မံပြုလုပ်ပေးပြီးသင်ကြည့်ရှုရန်လိုသည်။
Kurt Sutter သည်သူ၏နောက်ဆုံးပေါ်စီမံကိန်းနှင့်အတူ FX သို့ပြန်လာခဲ့သည် အဆိုပါ Bastard Executioner သူကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံး FX စီမံကိန်းထက်သွေး၊ သစ္စာဖောက်မှုနဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေပိုများမယ်လို့ကတိပေးခဲ့တယ်။ မင်းမဲ့စရိုက်၏သား , တကယ်တစ်ခုခုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်
Spider-Man - Riverdale ကြယ်ပွင့် Lili Reinhart က Spider-Gwen အဖြစ်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသည့်ပုံရိပ်နှင့်ကိုက်ညီသည်
ရာသီခုနစ်ရာသီအတွက် မင်းမဲ့စရိုက်၏သား Sutter ၏ဆိုင်ကယ်ကလပ်အကြောင်းပြောဆိုခြင်းအားဖြင့်ပရိသတ်များကိုဖျော်ဖြေခဲ့ပြီး၎င်းသည်သူ၏စီးရီး၏အလယ်ဗဟိုတွင် Jackson Teller (Charlie Hunnam) နှင့်အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည်။ Hamlet ဆိုင်ကယ်ပေါ်မှာ။ အဆိုပါပြပွဲ Netflix ကအပေါ် 50 အကောင်းဆုံးတီဗီရှိုးများထဲမှအဖြစ်ဂုဏ်ပြုပေမယ့်စီးရီးကျော်နှင့်အတူ Sutter ရဲ့အလုပ်၏ပရိသတ်များတစ်ပြင်ဆင်ချက်လိုအပ်, ယခုသူတို့ကရှိသည်။
အဆိုပါ Bastard Executioner မဟုတ်ပါဘူး မင်းမဲ့စရိုက်၏သား ဒါကြောင့်ပြပွဲကနှိုင်းယှဉ်ကြဘူး။ အဘယ်အရာကိုမျှအစဉ်အဆက်လိမ့်မည် မင်းမဲ့စရိုက်၏သား ဒါကြောင့်အဟောင်းပြပွဲမှအသစ်ပြပွဲနှိုင်းယှဉ်သာသင့်ရဲ့ကြည့်ရှုအတွေ့အကြုံကိုစျေးပေါနှင့်သင်အပြည့်အဝပြောပြရန် Sutter ရဲ့ဇာတ်လမ်းအသစ်တန်ဖိုးထားမသွားပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့အဲဒါကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့သတိထားပါ နှိုင်းယှဉ် ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ ။
သင်တစ် ဦး ပန်ကာဖြစ်လျှင် မင်းမဲ့စရိုက်၏သား သင်ကြိုက်ပါလိမ့်မယ် အဆိုပါ Bastard Executioner , နေပါစေစတိုင်နှင့် setting ကိုအတွက်ကာလတုန်းကမရခဲ့ဘူးကွဲပြားခြားနားမှု။ သငျသညျပြပွဲရဲ့အဖွင့်မြင်ကွင်းတစ်ခုအားဖြင့်ချိတ်ဆက်မထားဘူးဆိုရင်, သင်ရုပ်မြင်သံကြား၌ညံ့ဖျင်းအရသာရှိရမည်နှင့်အချို့သောအဖြစ်မှန်တီဗီပြပွဲသင့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားပိုကောင်းလိမ့်မယ်။
ဤပြပွဲသည်ရက်စက်စွာအကြမ်းဖက်ပြီးသင်၏မျက်နှာပေါ်တွင်သေးငယ်သောအပြုအမူအချို့ကိုမြင်တွေ့ရသည့်အခါသင့်ထိုင်ခုံတွင်ပုန်းနေလိမ့်မည်။ သို့သော်ထိုသို့ Sutter ရဲ့အစီအစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူသည်သင့်အားအဆင်ပြေစေရန်မလိုလားပါ။ သူသည် ၁၄ ရာစုဝေလနယ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှိနေသောစကြာ ၀ insideာအတွင်း၌ရှိသည်။
ပထမ ဦး ဆုံးနှစ်နာရီစက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်တွင်ပြသခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကဇာတ်ကောင် Wilkin Brattle (Lee Jones) နှင့်သွေး၊ ဓားများ၊ အသေကောင်များ၊ ကောင်းကင်တမန်များနှင့်နဂါးတို့ပါရှိသည်။ ပထမလေးမိနစ်လောက်လေးတယ် တိုက်ပွဲများသည်စစ်မြေပြင်တွင်ဒဏ်ရာရနေသော်လည်းသူ၏ဓားကိုချရန်နှင့်သူ၏သိပ်သည်းဆကိုတောင်းဆိုရန်ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ရသည့်ရူပါရုံတစ်ခုသို့မဟုတ်ကလေးတစ်ယောက်ရှိသည်။
Sutter ရဲ့အစစ်အမှန်ဘဝဇနီးနှင့်ကစားတစ် ဦး ကရောဂါကိုငြိမ်းစေသော / စုန်းမ မင်းမဲ့စရိုက်၏သား alum, Katey Sagal, Brattle သည်သူ၏ကောင်းကင်တမန်၏စကားများကိုလျစ်လျူရှုကာနောက်တစ်ခါဓားကိုကောက်ကာအခြားသူတစ် ဦး ၏ကံကြမ္မာကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတင်းအကျပ်ကြေကွဲဖွယ်အဖြစ်ဆိုးကြီးကိုတွန်းအားပေးပြီးနောက်သူ၏ဝိညာဉ်လမ်းညွှန်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။
၎င်းသည်ချို့ယွင်းချက်များသို့မဟုတ်clichéများမပါသည့်ပြပွဲတစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်ပရိသတ်ကိုစိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောပြပွဲမဟုတ်ပါ။ သို့သော်သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါက သားများ မင်းမဲ့စရိုက် အပေါ်စာရေးဆရာအဖြစ်သို့မဟုတ် Sutter ရဲ့အလုပ် ဒိုင်း ဒီပြပွဲကမင်းကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်
True Blood alum Stephen Moyer လည်းပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။Flora Spencer-Longhurst, Bríanအက်ဖ်အိုဘိုင်ရန်၊ အယ်လင်ရစ်၊ ဆမ် Spruell နှင့်တိမောသေ V. မာဖီ။ အဆိုပါ Bastard Executioner 10 p.m. မှာအင်္ဂါနေ့ညထုတ်လွှင့ ET ။
နောက်တစ်ခု:15 အကောင်းဆုံး Netflix မူရင်းစီးရီး
ထံမှပို Netflix ဘဝ
ပယ်ဖျက်ရန်အတွက် Hype House Netflix ပွဲကိုပယ်ဖျက်ရန်အတွက်အသနားခံလွှာသည်အလွန်ပျံ့နှံ့နေသည်
Sam of Sons: မှောင်မိုက်ခြင်းအဆုံးသို့ဆင်းသက်မှုကရှင်းပြသည်
Arcane သည် Legends of Legends စီးရီးသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် Netflix သို့လာသလော။
သူရဲကောင်း Fiennes Tiffin ၏အသက်၊ Instagram၊ အမြင့်၊ ချစ်သူ၊ အခန်းကဏ္: - After ကြယ်အကြောင်းသိထားသင့်သမျှ
Hunter x Hunter ရာသီ ၅ ရက်ဖြန့်ချိမည့်နေ့နောက်ဆုံးသတင်းများ - ရာသီသစ်တစ်ခုရှိပါသလား။ ဘယ်တော့ထွက်လာမှာလဲ
Sense8 ပြန်လည်သိမ်းယူခြင်း - ရာသီ ၂၊ အပိုင်း ၂: ငါဘယ်သူလဲ။
Gotham ရာသီ ၅ သည်နောက်လတွင် Netflix သို့ရောက်ရှိလာတော့မည်
သင်၏စွဲလမ်းမှုကိုစတင်ရန် Netflix တွင်အကောင်းဆုံး anime 15
The Olsen အမွှာများသည် Fuller House ရာသီ ၂ တွင်ရှိပါသလား။
F သည်မိသားစုရာသီ ၄ ရက်အတွက်ဖြန့်ချိသည့်နေ့၊
ရုံး - Michael Scott သည် ၂၅ ကြိမ်အစစ်အမှန်ဘဝတွင်အလုပ်ဖြုတ်ခံရလိမ့်မည်
Netflix မှအကောင်းဆုံးကာတွန်းကား ၅၀: တစ်ဝက်ဖုတ်သည်
သင်၏ရာသီ (၃) သည် ၂၀၂၁၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် Netflix သို့မလာပါ
Netflix နှင့်ပတ်သက်သောအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် ၅၀ - စစ်သည်များ၊ Butch Cassidy နှင့် The Sundance Kid နှင့်အတူကျောင်းဟောင်းကိုရယူပါ
Longmire ရာသီ 6: ဖြန့်ချိသည့်နေ့ရက်, အချိန်, နောက်တွဲယာဉ်, အနှစ်ချုပ်နှင့်အခြား
Ginny နှင့်ဂျော်ဂျီယာရာသီ2လွှတ်ပေးရန်ရက်စွဲ, သွန်း, အနှစ်ချုပ်, နောက်တွဲယာဉ်နှင့်ပိုပြီး
ဒီကဆြုံး premiere ရန်မျှော်လင့် Grey ရဲ့ခန္ဓာဗေဒရာသီ 17
တစ်လူသတ်ရာသီ4စီးနှင့်အတူကွာကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ
ဘယ်အချိန်မှာ flash netflix အပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်
တရားဟောဆရာ Eugene ဘာလုပ်ခဲ့ဘူး
အစစ်အမှန်ဘဝ၌လိမ္မော်ရောင်သည်နယူးက Black ဇာတ်ကောင်များဖြစ်သည်
Fixer Upper, Chopped, HGTV, Food Network မှ Netflix မှထွက်ခွာသည်
Sleepy Hollow မှာလူသတ်သမားကဘယ်သူလဲ။ (မင်းဘယ်သူ့ကိုမှမစဉ်းစားတော့ဘူး!)
အဲလက်စ် Strangelove လွှတ်ပေးသည့်ရက်စွဲနှင့်နောက်တွဲယာဉ်
ယခုအချိန်တွင် Netflix မှအကောင်းဆုံးသိပ္ပံရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား (၂၀၂၀)